Cibaaro Aduun. Cutubka kowaad. Q3aaad.. – Codka Dhaqdhaqaaqa Somali secular International
Cibaaro Aduun. Cutubka kowaad. Q3aaad..
Waa subax hore dhulku wa dhul xeebeed waana xili xagaa ah oo cadceed daran jirto.
Qoraxda arooryeed waxaad mooda inay caro iyo ciil lasoo kacday;, kulaylka qoraxeed waxaa dheer dabaylo aad moodo inay kasoo burqanayaan cadaabaha la sheego.
mililicada cadceedu waxay sitoos ah uga soo galaysa daaqad uu Geedi xalay hoosteeda ku gadaati dhacay, saaka wuu kalahsanyahay oo is ukac kama ahayne kulayla iyo falaaraha qorxada ee daloolada daaqada kasoo galaya ayaa u qoonsaday.
Dhanka kale, Ugaaso waxay soo gabagabaysay shaqo hawleedkii jikada oo waxay diyaarinaysaa quraacdi ninkeed iyo tan walalkeed.
Saaka wa subaxdii kowaad e Geedi daar magaalo kasoo dhex tooso. Wa subax uga duwan subxihii uu u, bartay, subaxan saaka ah Geedi uma taal hawl maalmeedkii miyi ee geel jireenta. Quraac iyo qabays kadib waxa la galay waraysigii xalay, waabariga lagu balamay waxa uu ku wareejiyay hadiyadii u reerka uga siday walow aysan sidaad usii buurnayn, se waxa uu kuwar galiyay xalad aabaareed inay reerkii soo wajahday.
Hase ahaate hadiyad ay isku baanato losoo dhiibay, waxa kale uu uwada ay tahay duco iyo dar daaran .
DAR DAARANKII AABE IYO HOOYO.
“Ugaasoy maanta waa malin aduun waxaan nahay waalidka. Tiir iyo tacab toona kaamaan hagran, maanta xaaladayadu waa mid cakiran. Ma sii sheegi karno inan ku nagaan doono degaankan; oo abaar ayaa dadkii kala didisay, hase ahaate goor walba iyo goob walba aan u hayaano waxaan ku dadaalayna war bixintayadu inaysan kaa maqnaan .Walaalka maanta adigu kula jooga waa curadkii hooyada iyo aabaha, waa wiilka kali ah een dhalanay adna kula dhashay. Wa midka maanta kuu garab ah. Is garab taag walalka, oo ku dadaal sidaad noloshiisa cusub ugu garabsiin lahayd.
Maanta cidaan adiga ahayn oo garab taagan majirto. Hooyo iyo aabe idinlama jogaan, is weheshada oo isku duubnaada kudadaal sidi aad walaalkaa maanta wax u bari lahayd. Waan ognahay culayska kusaaran balse hooyo iyo aabe noloshu maahan mid laga rajo dhigo. Walalka maanta waa xaanshi cad oo waxaad ku qorotaad leedahay; waa wiilka kali ah ee adiga iyo anagaba naga dhaxeeya, waan kusoo duceenay oo mar walba iyo xili walbaba ducayada ayaa ku garab taagan hooyo iyo aabe Guleed waa wiil da, ahaan kawayan ,se maanta adaa ka masuul ah oo dhankaad nolosha uga jihayso ujihaysanayaa.
hooyo iyo aabe magaalo waa micno badan mar way kusaacida marna way ku cayrisaa.
Nolashaa wax la isgu yahay, hooyo iyo aabe wa dar daarankeeni; qaado duco oo habaar ha doonan, qaado wanaag oo xumaan ha raadsan, qaado sharaf oo sharaf dhac hadoonan. Waxaad tahay marwo, waxaad tahay macalimadii beri mar waxaad tahay ardayad. Hooyo iyo aabe sidaas ayaan kugu ognahay quluubta ayaan marwalba kaaga ducayna noqoto midaan ku faano oo hanoqon mid naga nixisa “.
Dardaarankii hooyo iyo aabe wuxuu ahaa mid qalbiga Ugaaso taabtay, oo intay is celin wayday ayay ilmo la foorarsatay, oo waayo? Waa waalidkeed oy mudo kala maqnaayeen oo maanta ay u egtahay inay la joogto; mar waa walalked oo lagala dardaarmayo, mar waxay ka murugtay dhibta soo haleeshay degaankay kusoo hana qaaday qalbiga aya rogmaday oo maahayn mid ilamad cishan karta.
Waxay ahaataba waxay Ugaaso u kaba gashatay sidii ay walalkeed wax barsho ugaynblahayd, ugana miro dhalin lahayd dardaarankii walidkeed.
todobaad kadib waxay kasoo diwaan galisay dugsiga hoose dhexe ee x.mire.
Waa dugsi dawladeed wax barashadiisuna ay bilaash tahay;. Deedna waxay Geedi kuwar galisay inuu bilaabi tooda tacliinta horaanta xili qaboobaha ee soo socda, maadama waqti xagaa hada lagu jiro o ay dugsiyadu xiranyihiin, inta ka horaysan ay u qorshaysay inuu sii daalacdo dugsi quraanka .
Waa maxay xoriyada hadalka?
Hummaaga caqiiddada iyo habowga caqliga.!